Kuboshwe umculi ngengoma echwensa umengameli | News24
Kuboshwe umculi ngengoma echwensa umengameli
Lusaka – Umculi waseZambia ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngemuva kokuba abalandeli bakaMengameli waleli lizwe u-Edgar Lungu bekhononde ngengoma yakhe okuthiwa igxibhaza isithunzi salo mholi.
Ngokusho kwamaphoyisa le ngoma ingase ivuse uhlevane emphakathi kuqubuke nodlame.
UFumba Chama odume ngelikaPilato uchwensa owesilisa okuthiwa nguLungu ngamagama asengomeni yakhe athi “akanayo imibono uphathi ipotimende eligcwele amabhodlela kagologo.”
OLUNYE UDABA: Livele enkantolo iphoyisa elisolwa ngokushaya uzakwabo
Okhulumela amaphoyisa aseLusaka uCharity Katanga maphoyisa uthe lo mculi oboshwe ngoMsombuluko uzovela enkantolo ngoLwesibili lapho ezobhakana nokuthi ahlawuliswe noma abhadle ejele izinyanga eziyisithupha uma lingase limlahle leli cala.
“Le ngoma iphehla udlame emphakathini njengoba laba abayidlalayo behlaselwa yilabo abacabanga ukuthi abahambisani nomengameli obusayo,” kusho uKatanga.
ICosatu, ngokwesekwa yizinyunyana ezifana neNum neNehawu, bezisiphikisa isicelo seNumsa.